A kọwaala otu ndọrọ ndọrọ APC dịka otu ejighị ndụ ụmụ mmadụ kpọrọ ihe ma ncha. Onye nnọchite anya ọgbọ nta nkwado Abịa Nọọtụ n'ụlọ ọgbakọ ukwu sineeti ala anyị, bụ maazị Mao Ọhuabụnwa mere ka a mara nke a n'okwu ya oge ọ na-akwa arịrị banyere otu ndị Fụlani na-achị ehi si eme arụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị, nakwa otu gọọmenti etiti siri raa ntị mmanụ banyere nke ahụ, dịka a ga-asị na ọ bụghị mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata.
Ọ katọrọ otu ndị arụrụ ala ahụ si akwafusi ọbara ụmụ mmadụ aka ha dị ọcha na mpaghara ebe dị iche iche n'ala anyị, na-enwebeghị ihe ọbụla gọọmenti etiti mere banyere ya, bụkwazị nke na-egosi na ya bụ ọchịchị hụrụ ndụ ụmụ anụmanụ n'anya karịa ndụ ụmụ mmadụ. O kwuru na ihe a na-ekwuzị n'ala Naịjiria kwa ụbọchị abụghịzị ma 'e gburu mmadụ ?', kama, 'madụ ole ka e gburu ?', bụkwa nke aṅna-ahụtụbeghị n'ala anyị kemgbe Chukwu Abiama jiri were kee ya bụ obodo.
Ọ kọwara na ajọ ọnọdụ nchekwa ahụ dị n'ala anyị ugbu a nakwa otu ọchịchị etiti siri were ndụ ụmụ mmadụ eti èpèlé emeela ka ọtụtụ ụmụafọ aka anyị malite inwe nkoropu na ntụkwasị obi ha nwere na ya bụ gọọmenti Muhammadụ Buharị, bụ onye kwere nkwa na ya ga-ememila ajọ ọnọdụ nchekwa ma ya bata n'ọkwa ọchịchị, n'ihi na ihe niile ahụ abụrụla nkwa elu ọnụ a gbahapụrụ agbahapụ. O mekwara ka a mara na ndị jiri aha otu ndọrọ ndọrọ APC wee nọrọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu ala anyị, (ma nke ukwu ma nke ntà) abụrụla ndị ihere juputara ihu ugbu a banyere adịghị ike nke gọọmenti etiti n'okpuru ndọrọ ndọrọ ahụ, ma sịkwa na oge adighị anya, na nke ahụ ga-emezị ka ọtụtụ ndị malite ịgbahapụ otu ndọrọ ndọrọ ahụ wee na-abanye n'otu ndị ọzọ maka na ụtara dara n'ala anaghị asọ aja.
Ọ kpọkuzịrị gọọmenti Muhammadụ Buharị n'okpuru ọchịchị APC ka o were ọsọ were ije mee ihe ụmụafọ ala anyị na mba ụwa na-atụ anya n'aka ya ime dịka o siri metụta ọnọdụ nchekwa nakwa ngalaba niile nke ala anyị, bụkwa nke dịzị imi na ọnụ ka ntọọ ugbu a.